भाङमा के छ त्यस्तो जसको सेवनले मान्छेलाई रुवाउने र हसाउने गर्छ ? – Nepali Health
भाङमा के छ त्यस्तो जसको सेवनले मान्छेलाई रुवाउने र हसाउने गर्छ ?
२०७५ फागुन २० गते ८:४५ मा प्रकाशित
आज महाशिबरात्री पर्व । देशभरका शिवालयमा धुमधामका साथ महाशिवरात्री पर्व मनाइदै छ । शिवालयमा पुजाआजासंगै आज कतिपयले शिवजीको प्रसाद भन्दै भाङ (गाँजा) खाने खाने गर्दछन् ।
नेपालमा भाङ-गाँजा सेवन अवैध मानिएको छ । सरकारले यसपटक पनि पशुपति वरपर पनि गाँजा निशेधित क्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको छ । तर शिबरात्रीका दिन शिवालय आसपासमा शिवको प्रसादको रुपमा भन्दै कतिपयले निर्वाध रुपमा गाँजा सेवन गरेको देखिन्छ ।
भाङ-गाँजा सेवन गरी कोही लट्ठ परेको, कोही हाँसेको हाँस्यै अनि कोही रोको रोई गरेको देखिन्छ ।
भाङ-गाँजामा त्यस्तो के छ ? जसको सेवनले मानिसको स्वभावलाई क्षणभरमै परिवर्तन गरिदिन्छ ? आज हामी त्यहि शिबबुटी अर्थात भाङ-गाँजाको विषयमा कुरा गर्नेछौँ :
सातौँ फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो सकियो, १० हजार बढीले गरे अवलोकन
शिक्षक, विद्यार्थी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मुख स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रशिक्षण